एक वर्षदेखि आफ्नै भतिजा र भतिजीको २ शव कारमा राखेर घुमिरहिन् महिला, ट्राफिकले जाँच गर्दा उड्यो होस् ? – Taja Khawar
एक वर्षदेखि आफ्नै भतिजा र भतिजीको २ शव कारमा राखेर घुमिरहिन् महिला, ट्राफिकले जाँच गर्दा उड्यो होस् ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र २४, २०७८ समय: १८:०१:५२
एजेन्सी । एक महिलाले आफ्नै भतिजा र एक भतिजीको शव एक वर्ष देखि आफ्नै कारमा राखेर घुमिरहेकी थिइन् । एक वर्ष पछि जब एक दिन ट्राफिक प्रहरीले उनको कार खान तलासी गर्यो जे दृष्य देखियो प्रहरीकै होस उड्यो ।
यो घटना अमेरिकामा भएको हो । अमेरिकी प्रहरीले ति बालबालिका महिलाकै भतिजा र भतिजी भएको जनाएको छ । अहिले महिला पक्राउ परेकी छन् । घटनावारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । महिलाको कारको डिक्कीमा उनले शव राखेकी थिइन् ।
शुक्रबार एक नियमित ट्राफिक जाँचमा घटनावारे खुलासा भएको हो। अमेरिकाको बाल्टीमोरकी निकोल जोनसनमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । बाल्टीमोर सन अखबारका अनुसार ३३ वर्षीय निकोलले गत वर्ष मे महिनामा आफ्नी भतिजीको शवलाई एक सुटकेसमा राखेर डिक्कीमा हा लेकी थिइन्।
त्यसपछि उनले सामान्य रुपले त्यो कारको प्रयोग गरिरहिन्। एक वर्षपछि उनले भतिजाको शव पनि भतिजीको शवको छेउमा राखिन्। यो शवलाई प्ला स्टि कको झेलामा राखिएको थियो।
प्रहरीले उनलाई तिब्र गतिमा कार चलाएको भन्दै रोकेर सोधपुछ गरेको थियो । उनीसंग कारका कागजपत्र पनि थिएनन् । कागजपत्र नभएपछि प्रहरीले उनको कारलाई आफ्नो निय न्त्र णमा लियो । त्यसपछि खोजतलास गर्दा घटना खुलेको हो । निकोलका अनुसार उनलाई उनकी दिदीले यी दुई बालबालिका हेरचाहको लागि दिएकी थिइन्। उनीहरुको निधन कसरी भयो भन्ने उनले बताएकी छैनन् ।
Last Updated on: September 9th, 2021 at 6:01 pm